Ireo Fototry Ny Olana Ankehitriny Ao Amin’ny Repoblikan’i Centrafrique · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Avrily 2013 3:22 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Ελληνικά, Français
Raha nanambara fidirany tao Bangui renivohitra ireo ireo mpihoko avy amin'ny Séléka io sabotsy 23/03 io, ndeha hoezahantsika takarina ny antony ahafahana nilaza fa efa voavinavina ny hampandamoka ny fifanarahana tao Libreville.
Ny 2012 anefa dia niverina nandray fiadiana ireo mpihoko ary naka tanàna maro ho eo ambany fifehezany. Nolavin'ny filoha François Hollande ny hanome tohana ara-miaramila frantsay nangatahan'i François Bozizé mba hanakànana ireo mpihokon'ny Séléka tamin'ny Desambra lasa teo, ary novaliany fa « efa lasa» ny fotoanan'ny fanampiana tahaka izany, izay nanosika ny filoha ‘Centrafricain’ hanao sonia ireo fifanarahana tany Libreville nanery azy tamin'ity indray mitoraka ity handray praiminisitra avy amin'ny mpanohitra. Kely ny vintana hahatafita io governemanta io, noho ny antony maro : iray amin'ireny antony ireny ny hamaroan'ireo toerana maro noforonina tany anaty ministera mba hahafahana manozongozona ny fahefan'ny praiminisitra; ny iray hafa dia tsy nisy voahaja ny ambin'ireo fifanarahana tany Libreville.
Hatramin'ny nanaovana sonia io fifanarahana io, ny tafika avy any Tcahd manohana an'i François Bozizé dia tao Mali, nisy andiam-pihoko nitetika ny hiverina indray amin'ny ady mitam-piadiana amin'i Idriss Déby [ity farany izay tonga teo amin'ny fitndrana tamin'ny alàlan'ny fihokoana ihany koa].
Antso vitsy lasa izay, ny 16 martsa, noroahana hiala an'i Tchad ilay mpanohitra, Jean-Jacques Demafouth, toerana izay nialokalofany, nalefa anyy Centrafrique.
Tao anatin'io toe-draharaha io ny Séléka no nametraka lisitra iray miaty fitakiana iraikambinifolo tamin'ny filoha Bozizé, no sady nàka tanàna maro. Manambara ny fidirany ao Bangui renivohitra ry zareo io Sabotsy io.
Mangataka fivoriana maika ao amin'ny ONU ny governemanta frantsay.
Mampahafantatra antsika i Francis Laloupou ao amin'ny blaoginy “Centrafrique, Etat zéro” :
Ny filoha voalohany tao Centrafrique, Barthélémy Boganda, maty tamin'ny 1959, volana vitsy monja taorian'ny naha-voafidy azy … tanaty fijery manao dingan-dava … dia naminavina fomba iray hahafahana misoroka ny fivenjivenjen'ny fireneny efa tsinjony mialoha, tamin'ny fitlomana, indrisy tsy nisy vokany, hanangàna Fanjakàna Tokana Ao Afrika Afovoany ka ho isan'izany i Centrafrique, i Cameroun, i Congo sy Gabon.
… i Centrafrique ihany no niketrika , teo imason'izao tontolo izao, ny seho an-tsehatry ny fikororosiny tsy azony nihodivirana. Fitontonganana faran'izay tsy takatry ny saina, vokatry ny nataon'ireo fitondràna mpanimba zavatra no sady tsy manana izay kely indrindra amin'ny fahaiza-miaina. … Bokassa nanadra-tena ho amperora niaraka tamin'ny fanampian'ilay namana tsy mahafoy azy Valéry Giscard d’Estaing, talohan'ny nanonganan'ity farany azy tamin'ny 1979 … Mba hisorohana ny fahabangan-toerana eo amin'ny fitondràna, efa nikarakara tsara ny hanomana toerana ho an'i David Dacko ny tao amin'ny Elysée, tao anatin'ny iray tamin'ireo fiaramanidiny mpitatitra miaramila nankany Bangui handray anjara amin'ilay bemidina « Barracuda ». Efa nitsakoahana sahady ny tantara tao Centrafrique : napetrak'i Giscard d’Estaing ho eo amin'ny fitondràna, ho amin'ny toerana hisolo an'i Bokassa, i David Dacko, izy izay filoha fahiny ihany koa, naongan'i Bokassa tamin'ny 1965. Roa taona taorian'izay, tamin'ny 1981, David Dacko, izay tsy mba nahay fetsifetsy, dia hiharan'ny fanonganana iray vaovao hitondra ny jeneraly André Kolingba ho eo amin'ny fitondràna…
Manohy ihany isika amin'ny lahatsoratra BOZIZÉ, DEBY, SASSOU, OBIANG: Des putschistes dans la hantise d'être victimes de putsch (…mpanongana matahotra ny hiharan'ny fanonganana):
Fanamarihana goavana ao anatin'ny CENTRAFRIQUE : ANNUS HORRIBILIS (PAR JOSEPH AKOUISSONNE) :
Niaraka tamin'ny fanampian'ny governemanta Tchadiana no nahazoan'i François Bozizé ny fitondràna tany Centrafrique. Hatreo, niaina teo ambany fiahian'i Idriss Déby Filohan'i Tchad ny Repoblikan'i Centrafrique.
Efa 10 taona izany izao i François Bozizé no teo amin'ny fitondràna araka ny tsindrian'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity: Mine de rien, le soudard Bozizé fête ce 15 mars 2013, le 10ème triste anniversaire de son coup d’état (Sahala amin'ny tsynisy na inona na inona, mankalaza ny faha-10 taona mampalahelon'ny fanonganam-panjakàna nataony amin'ity 15 Martsa 2013 ity ilay miaramila mahery setra Bozizé) :
Mozambika 22 ora izay